छ्याङ्दी हाइड्रोको नाफा २५ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
छ्याङ्दी हाइड्रोको नाफा २५ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं मंसिर ९ ।
छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा ८९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
यो गत वर्षको तुलनामा २५.४० प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको यसै अवधिमा हाइड्रोले ७१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।विद्युत विक्री मार्फतको आम्दानी बढेकाले र सञ्चालन खर्च तथा प्रशासनिक खर्चमा सुधार गरेकाले हाइड्रोको खुद नाफामा बढोत्तरी देखिएको हो ।
याे पनि पढ्नुस मजदुर र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना ११ दिनदेखि ठप्प
हाइड्रोले विद्युत बेचेर २ करोड ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा एक लाख ९८ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्षको यसै अवधिमा हाइड्रोले विद्युत बेचेर एक करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस काबेली ए आयोजनाको निर्माण सुरु
चुक्ता पूँजी २७ करोड रहेको हाइड्रोको जगेडा कोषमा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ ।
हाइड्रोको प्रतिशेयर आम्दानी १३ रुपैयाँ ३३ पैसा छ । गत बर्ष हाइड्रोको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ६३ पैसा थियो । प्रतिशेयर नेटवर्थ १०५ रुपैयाँ ९२ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ३४.५१ गुणा छ । मेरोलगानीबाट
याे पनि पढ्नुस तामाकोशीले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने